Kutheni ukhetha iChunkai？
Kutheni le nto kufuneka sahlule ukuthengisa kumzi-mveliso? Nangona esi sigqibo sibhidekile, indawo yethu yokuqala kukuba sinethemba lokuba abathengi bethu bazakufumana ezona nkonzo zethu zilungileyo kwindawo enovakalelo olungcono.
Iindidi zezinto zokubopha ezinokutsha kunye nezinto ezinokuphinda zisebenze
Ngethamsanqa zininzi izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane kunye nezinto ezinokuphinda zisebenze ezinokubakho. Oku kubandakanya: Iphepha kunye nekhadibhodi - iphepha kunye nekhadibhodi zinokuphinda zisebenze, zinokuphinda zisebenze kwaye zibenokuboliswa ziintsholongwane. Zininzi izibonelelo zolu hlobo lokupakisha imveliso, hayi ubuncinci bokuba ...
Kutheni le nto uKhetho lweebhokisi zePakethe yokuPakisha zibalulekile?
Akukho mntu unokubona izinto xa uzijonga kuqala. Ubume bangaphandle okanye uyilo oluza phambi kwamehlo akho kuqala. Ukuba oku kubonakala okanye uyilo lutsala abathengi, baya kuthenga imveliso ngokuqinisekileyo, kungenjalo ilahleko yesabelo sentengiso. Ukuba umbono ophambili weebhokisi zokupakisha zemveliso ziyasilela ...
Umgangatho ophezulu weBhokisi yePizza ngoBukhulu obahlukeneyo
Iibhokisi zePizza ezikumgangatho ophezulu Senza umgca obanzi weebhokisi zepitsa zesitokhwe eziza ngobukhulu obahlukeneyo. Sigxininisa nakwiibhokisi zepitsa zesiko kwiivenkile ezikwiivenkile ezi-4-50. Sinokubanakho ukubaleka okuncinci ngokunjalo. Senziwe ukuba si-odole indawo kwaye ...